အက်ဒါဖာရီနို | | တရုတ် Android, စမတ်နာရီ, လဲ tutorial
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် Iradish X9 Y6 ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတစ်ခုကိုသင့်အားတင်ပြခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သော Android နှင့် iOS နှင့်လိုက်ဖက်သော Apple Watch ကိုယ်ပွား ယူရို ၃၀ အောက်သာရနိုင်မယ်၊ အခုတော့သတိပေးချက်တွေညှိနေတဲ့အချိန်မှာအမှားပြင်ဆင်မှုဖြစ်လာတယ်။ တစ် ဦး အတွက်အကြောင်းကြားစာများ၏ပြproblemနာကိုအဆုံးသတ်ထားတော်မူ၏ တရုတ်စမတ်နာရီ ၎င်းသည် Bluetooth Notifier အက်ပ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Android Lollipop ဗားရှင်းရှိသည့်စမတ်ဖုန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထင်ရှားသောတရုတ်စမတ်နာရီများရှိသတိပေးချက်များပြtoနာကိုဖြေရှင်းရန်မှာ အားလုံးတရုတ်စမတ်နာရီမော်ဒယ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်တရားဝင်သည် ၎င်းသည် Bluetooth Notifier အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်ပြproblemsနာများစွာပေးသောကြောင့်လက်ခံရရှိသောအသိပေးချက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
3 တရုတ်စမတ်နာရီကို Android နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ
5 BT အသိပေးချက်
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးတွင်ပူးတွဲပါသောဗွီဒီယိုတွင်တရုတ်စမတ်နာရီများရှိသတိပေးချက်များပြtoနာကိုသင်တစ်ဆင့်ချင်းတင်ပြသည်။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအဖြေတစ်ခု Bluetooth အသိပေးချက်ကို uninstall လုပ်ခြင်းနှင့် Smartwear ကို install လုပ်ခြင်း၊ တရုတ်စမတ်နာရီအတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရနိုင်သည်။
Smartwear ၏ရိုးရှင်းသည့်တပ်ဆင်မှုနှင့် Bluetooth Notifier ကို uninstall လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တည့်မတ်ပေးလိမ့်မည် အားလုံးအသိပေးချက်ထပ်တူပြုခြင်းပြproblemsနာများ Bluetooth Notifier ကိုသုံးသောတရုတ်စမတ်နာရီများ၏အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်မော်ဒယ်များအကြောင်း။
Smartwear ၎င်းသည်တရုတ်စမတ်နာရီအသုံးပြုရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်အတွက်အလွယ်ကူဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသို့မဟုတ် Bluetooth Notifier ထက်ပိုပါတယ် Smartwatch နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစမတ်ဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိနေသောအသိပေးချက်များအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် application ၏ကိုယ်ပိုင်ချိန်ညှိချက်များမှအပသတိပေးချက်များကိုသာလျှင်လက်ခံရရှိမည့် application များဖြင့် filter လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသော applications များ။
Google Play Store မှဤ screenshots များတွင်သင် application သည်တရုတ်ဘာသာဖြင့်ပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့ရသော်လည်းအမှန်တကယ်မှာ၎င်းဖြစ်သည် ဒါဟာအပြည့်အဝအင်္ဂလိပ်သို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ် ထိုသို့အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်နားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ကျွန်တော်တစ် ဦး cino စမတ်နာရီ, ပထမ ဦး ဆုံးအသေးစိတျတ ဦး ကိုဝယ်တဲ့အခါ သင်အသုံးပြုရမည့် operating system သည်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ဤစက်ပစ္စည်းများအတွက် Google တီထွင်ထားသော Wear OS ကိုလောင်းကစားနေသည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ကြာမြင့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ထိုသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းတွင် Wear OS application ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဒီ app ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံး devices များပေါ်တွင် Bluetooth ကိုသက်ဝင်ဖို့ရှိသည် Wear OS အက်ပ်တွင် Start configuration ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်စက်နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ရန်မျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုသာလိုက်နာရမည်။ ဖန်သားပြင်တွင် Connected သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ထားသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်၊ သို့မှသာ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။
ဆက်သွယ်ပြီးတာနဲ့ ငါတို့သည်ဤစမတ်နာရီကို configure လုပ်နိုင်ပါတယ် ရိုးရိုးလေးပါ။ Wear OS အပလီကေးရှင်းမှအခက်အခဲများစွာမရှိပဲကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ လက်ပတ်နာရီထဲမှာအသုံးပြုချင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိမ့်မယ်
တရုတ်စမတ်နာရီကို Android နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ
အရင်တုန်းကတရုတ်စမတ်နာရီမှာ Android Wear နဲ့ Wear OS မရှိဘူးလို့ပြောရင်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုသုံးရမယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ထဲကအတော်များများကိုစတိုးကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီ ထိုကဲ့သို့သော Smart Wear သို့မဟုတ် MediaTek စမတ်ကိရိယာအဖြစ်။ ကောင်းတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကတော့သတိပြုရမယ့်ပြproblemsနာတွေနဲ့အဆုံးသတ်တာအပြင်အပြင်ကနေ Android ဖုန်းနဲ့နာရီကိုဒီဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့နောက်ထပ် application တစ်ခုရှိတယ်။
Watch Droid ဖုန်းအကြောင်းပါAndroid အတွက်အချိန်အတန်ကြာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ application ကသင်၏စမတ်နာရီကို Android operating system နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သင့် application များမှအသိပေးချက်များရရှိရန်၊ သီချင်းဖွင့်ရန်စီမံရန်၊ ဖုန်းမှဖိုင်များကို smartwatch သို့ပို့ရန်နှင့်အခြားအရာများစွာကိုဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကူညီသည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နာရီအက်ပ်နှင့်ဖုန်းအက်ပ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်။
ရေးသားသူ: Lumatic Software များ
Droid လက်ထောက် Watch
လျှောက်လွှာနှစ်ခု download လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဖုန်း app ကိုဖွင့်ရမယ်။ ဒီစမတ်နာရီကိုဖုန်းကိုဒီတရုတ်စမတ်နာရီနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပြသထားတယ်။ ဒီတော့အဆင့်အနည်းငယ်နဲ့ဒီကိရိယာနှစ်ခုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ထားပြီးပြီ၊ အဲဒါကဒီနာရီကိုအသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်။
တရုတ်စမတ်နာရီရှိသူများအတွက်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်၊ သို့မှသာ၎င်းတို့အနေဖြင့်အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းအချို့မှာ -
ပြေးရန်ထွက်သွားကြသူအသုံးပြုသူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာ။ ၎င်းကိုသင်၏ပြေးခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းအဖြစ်တင်ဆက်ခြင်းကြောင့်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများအားလုံးတွင်ပြီးပြည့်စုံပြီးထိန်းချုပ်ထားသောမှတ်တမ်းရှိခြင်းကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ ဒီ app ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူကြိုက်များတဲ့လုပ်ငန်းအလိုအလျောက် app၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်ရက်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေလုပ်ငန်းစဉ်များစွာကိုစည်းရုံးနိုင်စေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို smartwatch ဖြင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးအချိန်နှင့်အမျှ ပို၍ ပြည့်စုံစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီ application ဟာအသုံးပြုသူများစွာအတွက်အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ: IFTTT, Inc
လူသိများသော messaging application သည်စမတ်နာရီနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည်, ငါတို့ဘယ်အချိန်မှာမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနေသည့်စာတိုအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့်သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအားကစားပြုလုပ်ရန်ထွက်ခွာသွားပါက၎င်းတွင်မည်သည့်သတိပေးချက်ကိုမျှလက်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီအပလီကေးရှင်းဟာတရုတ်စမတ်နာရီတွေမှာအသုံးများတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်သို့သော်များစွာသောကိစ္စများတွင်သတိပေးချက်များနှင့်အတူကဲ့သို့ပြcauseနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, ထောက်ခံချက်ကလက်ပတ်နာရီကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းအစားပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များအသုံးပြုခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နာရီလည်ပတ်မှုတွင်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလားတူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသော Droid Watch ကဲ့သို့သော။
ယနေ့ခေတ် သင်သည် Google Play မှ Bluetooth Notifier ကိုရယူနိုင်သည်, ကနေဆဲရရှိနိုင်ရှိရာ။ အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်အများအားဖြင့်အနှုတ်လက္ခဏာများဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မျှော်လင့်ထားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချမှုမပေးသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ သင်၏တရုတ်စမတ်နာရီတွင်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီသင်ခန်းစာလေးနောက်မှာသင်တတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် တရုတ်စမတ်နာရီကို set up နှင့်သတိပေးချက်များနှင့်အတူပြproblemsနာများကို fixed ပါပြီ။ ဒီစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ bug ကိုဖြေရှင်းဖို့နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုသင်ရှာတွေ့ပြီဆိုရင်၊ မှတ်ချက်များထဲမှာခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာငါတို့အားအသိပေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » တရုတ် Android » တရုတ်စမတ်နာရီများ၌အကြောင်းကြားစာပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
မင်းကဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲ။ ဒီ app ကကောင်းတယ် !!
ငါ master ကို install လုပ်တယ်၊ အမှန်တရားကတော့ငါကအသိပေးအကြောင်းကြားထားတဲ့တစ်ခုတည်းသော app ပါ။ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကဖုန်းစနစ်ကနေအကြောင်းကြားစာတွေရတယ်၊ configured applications တွေဆီကအကြောင်းကြားစာမရှိဘူး၊ ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး အချို့သဲလွန်စ?
သင့်မှာဘာဖုန်းရှိလဲ။ moto g 2014 နဲ့အတူတူပဲ
ရောဘတ် encinas ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ် app တွင်နာရီကိုအသိအမှတ်မပြုသောပြrecognizeနာတစ်ခုရှိသည်
Roberto Encinas အားပြန်ကြားပါ
ငါ့မှာ KSIX Smart Watch ရှိတယ်၊ bluetooh နဲ့ချိတ်တယ်၊ ပထမ ၅ မိနစ်လောက်အလုပ်လုပ်တယ်၊ BT နာရီပျောက်သွားတယ်၊ ငါ့မိုဘိုင်းက Samsung GALAXY Ace မော်ဒယ် GT558391 Android ဗားရှင်း 2.3.6 ။
ကျွန်ုပ်သည်တရုတ်စမတ်နာရီတစ်လုံးဝယ်လိုက်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြီးပြည့်စုံသော LG Cel ၏ Bluetooth ကိုချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း၎င်းသည်မချိတ်ဆက်ပါ။ ငါကအကြောင်းထွက်လာသောအကြံပြုချက်အားလုံးနီးပါးကိုဖတ်ပါ, ငါ app အားလုံးနီးပါးနှင့်ဘာမျှမကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဆက်တင်များကိုစစ်ဆေးသောအခါကျွန်ုပ်သည် "တည်နေရာ" ကိုပိတ်ထားသည်။ ငါကဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်း။ သူတို့ကချက်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးနာရီထုတ်လုပ်သူကအကြံပြုထားတဲ့ app ကိုပဲသုံးတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ alication ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့လို့ ၀ မ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့တရုတ်နာရီရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းချင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်က W3 ပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင့်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်ပါ့
ငါအနည်းငယ်ရ intale ကြောင့်ငါ့ကိုအမှားပစ်သို့မဟုတ်ငါ့ကွန်ပျူတာကိုသာ s5 သည်ပြတ်တောက်
ငါ့မှာ a8 နာရီရှိတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ notifications ကောင်းသွားပြီ။ အဲဒါကို customize လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါပြproblemနာတက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ samrtwatch မှာဘာတစ်ခုမှထားစရာမရှိဘူး။
Android 08 lollipop ပါသော LG G3 ဖုန်းဖြင့် GT5.0S စမတ်နာရီပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ကျွန်တော့်မှာ One Touch Pop C7 ရှိပြီးရက်အနည်းငယ်လောက်အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့အလုပ်ကိုရပ်လိုက်ပြီးပြတ်သွားတယ်။
အာဗေလ Sanabria ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ s5 နှင့်တစ်ဝက်တစ်ပျက်အလုပ်လုပ်နေပြီး Lenovo A2010 နှင့်အသံသည်သာပြသသော်လည်းဘာမျှမပြသပါ
Abel Sanabria အားပြန်ပြောပါ
ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ့ကို install လုပ်ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည် 505 ကိုတပ်ဆင်။ မရနိုင်ပါကကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင့်ဖုန်းရှိ smartwatch နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအခြား application ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး SmartWear ကိုထည့်ပါ။
s8 နှင့်အတူ u7 ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Arturo Xavier ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ S7 ရှိတယ်၊ ငါမချိတ်နိုင်ဘူး၊ ဆက်ပြီးဆက်နေတယ်၊ ​​တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
Arturo Xavier အားပြန်ပြောပါ
တရုတ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နာရီတစ်လုံးနှင့်တစ်နာရီလျှင်တရုတ်တစ်လုံးစီသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါက်ထားသည်
ortega ကောင်းကင်တမန်မင်း aragon ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင် GR08 ရှိပြီးသတိပေးချက်များကိုပြုပြင်မထားပါ
angel aragon ortega သို့ပြန်သွားပါ
လူးဝစ် Barrios ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်ကဗင်နီဇွဲလားမှပါ၊ ကျွန်တော့်မှာ U8 မော်ဒယ်လ်ရှိပြီး၎င်းကို android တက်ဘလက်သို့မဟုတ်အခြား android ထုတ်ကုန်များတွင်တပ်ဆင်ပြီး SmartWear app သည် U8 စက်ကိုမသိနိုင်ပါ။ ဖုန်းကို bluetooth ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း app ထဲတွင်“ SmartDevice connect Fail” ဟုမဆိုကြောင်းကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။
Luis Barrios ကိုပြန်ပြောပါ
ကာရိုလိုင်းနား Soto ဆေးလ်ဗား ဟုသူကပြောသည်
လျှောက်ထားငါ့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ပျော်ရွှင်သည်။ Sony Xperia C4
Carolina Soto Silva သို့ပြန်သွားပါ
ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာ no1 g3 နှင့် application fundo ရှိတယ်၊ အကြောင်းကြားစာများရောက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မှာဘာပြproblemနာမှမရှိဘူး။ ငါသူတို့ကိုစမတ်နာရီပေါ်မှာဖတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါအရမ်းတောင်းတာလားဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ Whatsaps နဲ့တခြားသူတွေကိုသင်ဖတ်နိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ချက်တွေကိုငါဖတ်ဖူးတယ်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်၌ရှိသောမည်သည့်သတိပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမက်ဆေ့ခ်ျများသူတို့ကိုယ်တိုင်မဖတ်ပါ ငါ့ကိုကေဘယ်လ်ယူလို့ရမလား။
မင်္ဂလာပါ Josemi ငါအတူတူစမတ်နာရီနှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ပါ။ WhatsApp မှာမတူညီတဲ့ chats (၃) ခုထဲက message (၇) ခုရှိတယ်။ SUV ကားသို့သော်ငါသူတို့ထဲကတစ်ခုတည်းကိုဖတ်ရှုနိုင်ဘူး။
ငါနဲ့တူတူပဲ၊ အသိပေးချက်ပဲ၊ ငါမဖတ်နိုင်ဘူး။ စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်နာရီအချို့ကိုအကြောင်းကြားရန်အတွက်သာအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဖတ်ခဲ့သည်
APP မရနိုင်ပါ။ 🙁
မင်္ဂလာပါ။ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သို့သော်ဗွီဒီယိုမရရှိနိုင်ပါ။ 🙁
ဟူးလူး ငါအတူတူစမတ်နာရီနှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာရှိသည်။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့သင်စီမံခဲ့တာလား။ ငါဥပမာ chats ၃ ခုမှမက်ဆေ့ခ်ျ ၇ ခုရှိကြောင်းတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပင်စာမဖတ်နိုင်သေးပါ။
iPhone အတွက် Smartwear App ဗားရှင်းရှိသလား။
iPhone နှင့်အတူ GTO8 တွင် whatsapp ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
Deiby Cobo ဟုသူကပြောသည်
hello သူငယ်ချင်း GT08 ကို iphone နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသလားဆိုတာမင်းရဲ့မေးခွန်းကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Deiby Cobo အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်းမှာကျွန်ုပ်မှာ kingwear kw18 ရှိပြီးလက်ပတ်နာရီများထည့်ချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် iPhone 6s ရှိပါပြီ၊ အဘယ် app များကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုကြသနည်း။
ဟယ်လို..! မင်းရဲ့ရှင်းပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသံသယရှိတယ်။ ဖုန်းနှင့်နာရီများ၌ချိတ်ဆက်ထားပုံရသော်လည်း app သည်နာရီကိုရှာမတွေ့ပါ။ ၎င်းသည် U8 ဖြစ်သည်။
José Ricardo ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာညနေခင်းပါ။ ငါမေးခွန်းကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာမမေးခဲ့ရင်ပထမဆုံးတောင်းပန်ပါ (ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာထားရမှန်းမသိတော့) ငါသမီးအတွက်တရုတ်စမတ်နာရီတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ သူမမှာစပိန်စကားမရှိဘူး၊ တစ်နည်းနည်းနဲ့ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
Andrea လည်ပင်း ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် A1 ရှိပြီး၊ WhatsApp ၏အသံသာမက်ဆေ့ခ်ျမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ထံတွင်အဖြေတစ်ခုလိုအပ်သည်
Cuello andrea သို့ပြန်သွားပါ
Lois david ဟုသူကပြောသည်
Lois David အားပြန်ပြောပါ
Guillermo Santiago ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ smartwash သည်ခေတ်မမီတော့ပါ။ qr ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်သောအခါကျွန်ုပ်သည်စတိုးဆိုင်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုပို့သော်လည်း၎င်းသည်မူရင်း bt notifier ကို download လုပ်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်တော့်ကိုအဲ့ဒါကို configure လုပ်ခွင့်ပေးမလားကြည့်လို့ရမလား? ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Guillermo Santiago သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မဖြေရှင်းနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ email သည် andrea_itaty @ hotmail ဖြစ်ပါသည်။ com ငါအကူအညီလိုတယ်
Andrea Cuello အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် sony smartwatch3ရှိ၍ အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်၎င်းသည်နာရီတစ်လုံးတည်းတွင်ထပ်တူအမှားတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာဤမေးခွန်းကိုမေးမြန်းရန်သင့်တော်မည့်နေရာလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်၏သမီးအတွက်တရုတ်စမတ်နာရီတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးသူမကစပိန်ဘာသာစကားမပါရှိပါ။ အဲဒါကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါ့မလား ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်စုံစမ်းမှုတစ်ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် j7 ရှိပြီး gt08 စမတ်နာရီရှိသည်။ WhatsAp notifications များကိုကျွန်တော်မဖတ်နိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း Facebook Messenger မှကျွန်ုပ်ထံလာသူများအားဖတ်နိုင်လျှင်အဖြေတစ်ခုရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တွင်နာရီပေါ်တွင် qr ကုဒ်ပါသောလျှောက်လွှာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်
ငါနေဆဲနံပါတ် G1 နှင့် whatsapp သီးခြားစီသံသယရှိသည်
WhatsApp ၌ကျွန်ုပ်တိုမက်ဆေ့ခ်ျများရှိနေကြောင်းသတိပေးချက်ကိုသာတွေ့မြင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်မဖတ်နိုင်ပါ။ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
KW88 Smartwatch ကိုခင်ဗျားသိတယ်။ ထုတ်ကုန်ရဲ့ကြော်ငြာမှာရေးထားတာလောက်မကောင်းဘူးလားလို့ငါ့ကိုပြောနိုင်မလား။
Sebastian Andres Galaz Ponce ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သော2ရက်ကကျွန်ုပ်အနေဖြင့် U8 စမတ်နာရီကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းကြားစာများကျွန်ုပ်ထံလာပြီးပြreadနာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စာဖတ်နိုင်သော်လည်းပြtheyနာရှိသည့်အခါသူတို့ရောက်ရှိချိန်တွင်အသံမြည်ခြင်း၊ မတုန်ခြင်းနှင့်သူတို့ကူညီနိုင်လျှင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်တော့်အီးမေးလ်က sebastian.galaz93@gmail.com
Sebastian Andres Galaz Ponce ကိုပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် dz09 ၀ ယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၎င်းသည်ငါ့ကို whatsapp (သို့) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို install လုပ်ခွင့်မပြုပါ။ ဘရောင်ဇာလည်းမရှိပါ။ ၎င်းတွင်၎င်းတွင်ချစ်ပ်ရှိပြီးသား ဖြစ်၍ ဆဲလ်ဖုန်းမှတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုတပ်ဆင်ရန်ဘရောက်ဇာသို့ပို့သော်လည်း၎င်းကိုပေးသည်။ အမှားတစ်ခု၊ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့လည်ခင်းပါ ငါ့မှာ iPhone ရှိတယ်။ dz09 လက်ပတ်နာရီကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်သာအလုပ်လုပ်တယ်။ စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမမြင်ရဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံးကနေဖတ်လို့ရရင်အနည်းဆုံးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျနဲ့ Whats App ကိုသူတို့ဖတ်နိုင်ရင်ကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ဘာမှသတိပေးချက်များကိုမရပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသည်ကျွန်ုပ်ကိုရောက်ရှိသည်။ သို့သော် WhatsApp များကမရ။ ငါဒီ application ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ များသောအားဖြင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်သူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းအချက်ပြသည်။ ဒါပေမယ့် WhatsApp များမရောက်သေးဘူး - \_ t
ကျွန်ုပ်၌ gt08 ရှိပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရောက်လာသော်လည်းသတိပေးချက်များသည်ဘာမှမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမျှကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သင်ခန်းစာများစွာကိုမြင်တွေ့ရပြီးပြီ။ ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိဘဲအရာအားလုံးနှင့်အသိပေးချက်များကိုပြုလုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mediatek SmartDevice ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ငါအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်ပြီ။
ငါစမတ်နာရီ ၀ ယ်လိုက်တယ်။ တရုတ်လိုဘထွေးတစ်ယောက်ရဲ့စာကိုမဖတ်နိုင်ဘူး။ မင်းကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်လဲ ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်
ငါ့မှာနာရီ ၁ g1 ရှိပြီးနာရီကိုငါ့ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့တွဲလို့မရဘူး၊ ငါမှာ moto g6 plus ရှိတယ်
အန်သိုနီ M က Benavides L ကို ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုကူညီပေးပါ dranthonymbl@gmail.com
Anthony M Benavides L ကိုစာပြန်ပါ
ဟယ်လို။ ငါ့မှာ gt08 android 6.0.1 ရှိတယ်။ ငါ apk အားလုံးနီးပါးကို install လုပ်ပြီးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးသော်လည်း whatsapp ကိုမဖတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် k88h ရှိပြီးပြီးပြည့်စုံသောနေ့ရက်နှစ်ရက်ပြီးနောက် ... ၎င်းကိုဖွင့်သောအခါ၊ တတိယနေ့သည်ဆက်သွယ်မှုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ ..and ဒီနေ့ထိ ... တစ်စုံတစ်ယောက်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ... သင်မည်သို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ ..it သာ on of the စေသည်နာရီ၏ chive ရှိပါတယ် ...
တစ်စုံတစ်ယောက်က iphone နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်သလား ????
ကျွန်ုပ်၏ dz09 သည်အင်္ဂလိပ်မှစပိန်ဘာသာသို့ပြောင်းလဲရန်မပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
android 7.0 အတွက်သဟဇာတဖြစ်သော smart rejoj အတွက်မည်သည့် app မဆို?
ငါမှာ Smart Watch q18 ရှိပေမယ့်ကင်မရာကပုံကိုဇောက်ထိုးပြနေတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူး။
Carlos corona အားပြန်ပြောပါ
ငါ Smartwartch ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ BTNotification ကိုငါသွင်းလိုက်ပြီ၊ အဲဒါကငါ့အတွက်ကောင်းပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူမှာလဲမသိဘူး၊ သူတို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ မှတ်ချက်တွေကိုမြင်ဖူးတယ်၊ ဒီအရာတွေကိုဘာကြောင့်မကူညီဘဲငွေနဲ့လုပ်နိုင်မှာလဲ MediaTek လည်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Wsap မှာစာသားမဟုတ်ဘဲ msg အသိပေးချက်ကိုသာတွေ့လိမ့်မယ်။ ပုံမှန်ပါပဲ။ မေးခွန်းများ .. .. ရှိသည် အင်တာနက်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဆက်အသွယ်များကိုနာရီသို့တင်ပို့ပါ၊ ၎င်းကို BT မှဆက်သွယ်မှုမရှိသောလက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်သုံးပါ။ မည်သည့်မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်မဖြေဆိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပ်အတော်များများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်၊ ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အသိပေးချက်များကိုများစွာတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော် wassap မှစာများမတွေ့နိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား။ ငါ့မှာ Bt2 U8 ရှိတယ်
ကျွန်ုပ်သည်nº1 S9 စမတ်နာရီကို ၀ ယ်လိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ Motorola G3 android6သတိပေးချက်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ငါ android v နှင့်အတူ Samsung နှင့်အတူကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ။ ၄.၂ နှင့်အလုပ်လုပ်ပါသည်။
စမတ်နာရီတစ်ခုတွင် SIM နှင့်ပါ ၀ င်သည်ကိုမည်သို့မြင်နိုင်သည်ကိုသိလိုပါသလား။ ဘလူးတုသ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ် sim sim ဖြင့်မလုပ်နိုင်ပါ။ တရုတ်လူမျိုး ... DAM G3. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
စာမျက်နှာ ၂၀၀ ကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါ့ရဲ့တရုတ်စမတ်နာရီကိုပြုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Settings မှ> BT Notification -> google play မှ option ကိုသာကြည့်လိုက်သည်။ အဲဒီကနေနာရီမျက်နှာပြင်မှာ QR ကုဒ်တစ်ခုပေါ်လာပြီး google play မှကူးယူထားတဲ့ QR code application နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို BT Notification ရဲ့ google play address ကိုအတိအကျပို့ပေးပါ၊ ၎င်းသည်နာရီကို 200% အလုပ်လုပ်စေသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းတယ်။ မင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ps: ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းသည် LG Bello ၏နှစ်ဆချစ်ပ်မော်ဒယ်ဖြစ်သည် 2015 u = နှင့်စမတ်နာရီသည်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်ကုဒ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာကမျှမပြောပါ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဗားရှင်းဒါမှမဟုတ်ပုံစံကိုငါမသိဘူး
ကျွန်တော့်အတွက်ဘယ် app နဲ့မှအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ နာရီကတော့ lemfo lf1 ဖြစ်ပြီး mobile က oneplus3 ။
အဲရစ် vazquez ဟုသူကပြောသည်
သင်၏မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုရင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် u8 smartwatch နှင့် Moto G4 android 7.0 ပါရှိပြီး၎င်းကို Bluetooth အားဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏ဗားရှင်းအားလုံးတွင် Bt အသိပေးချက်မှလျှောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ Smart Watch၊ Smart Watch Helper၊ Mediatek SmartDevice၊ Smart Wear ။ အဲဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်အမှားတစ်ခုလုပ်မိတယ်၊ တချို့ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့အရာတွေပါ။ ဒါပေမယ့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါဖုန်းကအမှားတစ်ခုမှတ်ပြီးမမျှော်လင့်ဘဲပိတ်လိုက်တယ်။
ယခုပင် Smart Watch ကိုအခြားဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုနှင့် android 5.0 lollipop နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး Bt အကြောင်းကြားစာအက်ပလီကေးရှင်း (စမတ်နာရီကိုတောင်းခံသည့်) နှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာဆက်သွယ်နိုင်သည်။
Erick Vazquez အားပြန်ပြောပါ
M မီရီဒါ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းလေးမှာ Kingwear kw88 ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါ့လက်ပတ်နာရီကို Samsung Galaxy galaxy note4နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ မင်းရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုငါလိုက်ခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါ့နာရီကိုမမှတ်မိတဲ့ Android wear application နဲ့တွဲလို့မရဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ပတ်နာရီဟောင်းဖြစ်သော Sony smartwatch 3၊ Android wear application တို့နှင့်ကျွန်ုပ်သိသည်။ kw88 ကိုကျွန်ုပ်မှတ်စုတွင်ချိတ်ဆက်ရန်မရနိုင်ပါ။ သင်ချိတ်ဆက်ရန်အခြားမည်သည့်လမ်းရှိပါသလား?
အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ YouTube channel မှာမင်းနောက်လိုက်တစ်ယောက်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ပနားမားမှလာ၊ သင်၏ကြီးကျယ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရပ်လိုက်ပြီ။ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည် lifesense ကုမ္ပဏီမှ manbo2နာရီရှိသော်လည်းတရုတ်ကိုကျွန်ုပ် ၀ ယ်လိုက်ပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာရှိနေသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုမရခဲ့ပါ။ ကုမ္ပဏီမှဘာပေးသည်ကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ မရပါ
Jose ဆေးလ်ဗား ဟုသူကပြောသည်
Jose silva သို့ပြန်သွားပါ
ငါ့မှာ smartwatch dz09 မကြာသေးမီကငါမိုဘိုင်းကဒ်တစ်လုံးထည့်ပြီး WhatsApp, facebook နှင့် twitter ကို download လုပ်ရန်အင်တာနက်မရပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် DZ09 ကို ၀ ယ်ပြီး WhatsApp ၏စာသားကိုဖတ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်သိသော application များအားလုံးကြိုးစားပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ပါသည်။ သူကကျွန်ုပ်အားသတိပေးအကြောင်းကြားပြီးမည်သူပို့သည်၊ သို့သော်စာသားအလွတ်မရှိပါ။ ငါ smartwatch ထဲမှာ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ သင် notifications ၏စာသားကိုကြည့်နိုင်သည်ကိုနားလည်ပါသည်။ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးပြီ ကျွန်တော့်ရဲ့ oneplus တစ်ခုမှာ Android ရဲ့ lineos os version ကို install လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြေရှင်းနည်းရှိမရှိငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင် dz09 နာရီနှင့် Moto g5plus ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုကူးယူပြီးအဆင်ပြေသည်။ သို့သော်အပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်သောအခါ (ကျွန်ုပ်ဖုန်းတွင်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများပေါ်လာပြီးဖြစ်သည်။ ) နာရီသည်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် Bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဖုန်းချိန်ညှိချက်များတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်းအက်ပ်တွင်မပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်သည် U8 နှင့်ပြproblemနာရှိသည်။ ဘာသာစကားကိုစပိန်ဘာသာသို့ပြောင်းလဲသည့်နေ့ရက်သည်တနင်္လာနေ့တွင်အမြဲပေါ်လာသည်။ နေ့များကုန်ဆုံးပြီးရက်အရေအတွက်သည်အဆင်ပြေပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှာကျန်နေသေးသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရက်စွဲသည်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။ ငါ့အဘို့နှင့်ပြောင်းလဲမှုလျှင်။ ကူညီကြပါ !!!!!!!
ငါ့မှာ dz09 ရှိပေမယ့်အများကြီးကပ်ထားတယ်။ ပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်ငါဘက်ထရီကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်၊ ငါသတိထားမိတာကဘက်ထရီဖောင်းပွနေပြီးအဆက်အသွယ်မှားနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်၏ p70 စမတ်နာရီဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာများနှင့်၎င်းအရာများအတွက် WHATSAPP PLUS ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်လက်ပတ်နာရီသည်ထိုသတင်းများနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျများမရရှိပါ၊ ၎င်းသည်မူလ WhatsApp ဖြစ်ရမည် အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါ။
WHATSAPP PLUS ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်ပြုမည့် app သို့မဟုတ်တစ်ခုခုအကြောင်းမည်သူမဆိုသိပါသလား။
Moto Z4 သည် Snapdragon 675 နှင့် ၆.၄ "OLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
Huawei Mate 30 Lite ၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်